Sida Sweden loo doorto hogaamiye xisbi oo cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sida Sweden loo doorto hogaamiye xisbi oo cusub
Qaabka loo doorto hogaamiyaasha xisbi Sweden
La daabacay fredag 14 november 2014 kl 15.17
Maadaama maanta oo jimco ah laamaha gobolada ee xisbiga Moderatka soo gudbinayaan go'aanadooda ayey u muuqataa in Anna Kinberg Batra kalo wareegi doonto xilka hogaaminta Fredrik Reinfeldt bisha mars ee sannadka fooda nagu soo abaya.
Ka dib doorashadii iinta badneyd ee xisbiga Socialdemokraternas ku doortey hoogaamiyihii ee xisbigas Håkan Juholt, ayey xisbiyada Centerpartiet iyo Vänsterpartiet doorteed in ay hogaamiyahooda ku soo xulaan hanaan furfurnaan ku dheehan tahay. Laakiin taas wax saameyn ah kuma yeelan xisbiga Moderaterna, sidaas waxaa leh guddoomiyaha guddiga diyaarinta doorashada hogaamiyaha cusub ee Moderaterna Lars-ingvar Ljung
- Maya, ma qabo in sidaas la oran karo balse waxaa la oran karaa hanaanka loo marayo arrinkan in uu yahay mid raacsiinsan qaab dhaqmeed loo maro soo xulidda hogaamiye xisbi ee cusub, ayu yeri.
Håkan Juholts waqtiga uu hogaaminayey Sociademokraterna waxay aheyd xiligi gaaban oo dhaliil badnaa. Markii uu xilka iskaga degay bishii januari 2012 waxaan dhaleeceyn badan loo jeediyey qaabka loo maray soo doorahsadiisa. Guddiga soo xulay Jult ayey shaqada ay ku xulayeen hogaamiyaha cusub ee Socaldemokratiga ahyed mid sir ah oo xiran una suurtogalin xubna xisbiga in ay la socdaan sida ay wax u socdaan.
Jenny Madestam oo ku xeeldheer culumkta siyaasadda ayaa sheegtey in qaabkii loo doortey doortey Juholt iyo dhaleeceynta ka dhalatay wax ka badashay sida loo doorto hogaamiyaasha xisbiyada Sweden.
- Doorashadii Håkan Juholt waxay isbadel ku keentey sida loo arko hanaanka ay xisbiyadda ku doortaan hogaamiyaashooda, gaar ahaan dhaleeceyntii fara badney ee ka dhaltay doorashadiisa. Taas waxay keentey in xisbiyo ay ka mid yahiin Centerpetiet iyo Vänsterpatiet ay door bidaan hanaan ka gedisan hanaankii ay ku soo xuli jireen hogaamiyahooda. Halka Miljöpartiet weligii laha hanaan furfuran ayna xilka hogaaminta ku tartamaan musharaxiin kalo gedisan. Ka dib fadeexadii ka dhalatay sidii loo soo xulay Juholt waxaa kalo cadaatay xisbiyada leh hanaanka furfuran oo ay ku soo xulaan hogaankooda iyo xisbiyada leh hanaan ku dhisan caado raac, xisbiyada noocaas ah waxaa ka mid ah Socialdemokraterna iyo Moderaterna, ayey tiri.
Laakiin saas oo ay tahay xisbiyada isku dhabo ayey u maraan meelmarinta hogaamiyaha cusub. Marka hore waxaa loo soo bandhigaa xubnaha iyo laahmaha kalo gedisan ee xisbiga, ka bacdiina gudiga doorashada ayaa kulan weynaha xisbiga u soo bandhiga, kulankana cod ayuu u qaadaa.
Laakiin waxaa jira aragtiyo kalo gedisan oo ay xisbiyada ka qabaan hanaanka xulidda hogaamiyaha cusub, Socialdemokraterna iyo Moderatka oo dhinac ah iyo xisbiyada kale aan ka aheyn Sverigedemokraterna madaama xisbigaan intii uu noqdey xisbi weyn uusan weli badalan hogaamiyahooda. Aragtida laga heyso hanaanka dooraashada hogaamiyaha xisbiga waxay hadba ku xiaran tahay baaxadda iyo weynaan xisbiga, ayey tiri Jenny Madestam:
- Labadaan xibiga Socialdemorkaterna iyo Moderaterna waxay dadka u arkaan in waxa la dooranyo aysan aheyn keliya hogaamiyaha xisbiga balse la dooranayo musharax ra’iisalwasaarinimada. Xisbiyadaan waxaa ka jirta aragti ah in doorashada hogaamiyaha ay muhiimad weyn leedahay oo aan loo mari karin dhabaha ay doorteen Centerpartiet marka ay dooranayeen Annie Lööf ama Vänsterpartiet marka ay dooranayeen Jonas Sjöstedt. Kaas oo ah hanaanka furfuran. Waayo waxay ka welwelsan yahiin in hanaanka noocan ah uu keeno musahraxiin badan oo xilkas isku soo taaga, taas oo ay ka cabsi qabaan in ay abuurta iska horimad.
Ra’iisalwasaare uusan xisbiga oo dhan dooran waxaa loo arki karaa mid markiise horweba tabar daran, ayey tiri Jenny Madestam.
Lars-Ingvar Ljungman, guddoomiyaha guddiga doorashada ee Moderaterna ayaa qirsan in xisbigiisa waxyaabo badan iska shabahaan Socialdemokraterna, hogaamiyaasha xisbiyadan mar kasta waxay yahiin musharaxiinta xilka ra’iisalwasaaraha. Waana taas mid u sababta ah in aan marna la arag mudanayasha labadaan xisbe ee waaweyn oo marna si furun u oranaya waxaan rabaa in aan noqdo hogaamiya xisbiga:
- Dabcan wey iska cadahay, hadii la raaco hanaanka ay raaceen xisbiga Centerpartiet hogaamiyahood dhawaan ku doorteen, waxay taas abuuri kartaa isku dhac iyo iska horimaasho ka dhex dilaacda xisbiga, marka xisbigeena oo ah xisbi weyn ahna xisbi xanbaara qaranka iska hormaad dhaawac weyn ayuu u geysan lahaa. Suurtogal ma ahna in xisbigeena ay iska soo sharaxaan shan musharaxiin, ayuu yeri.
Imminka hanaan soo xulida hogaamiyaha cusub ee ka dhex socda xisbiga Modaraterna dhamaan dadkii loo filayey in loo dhiibi doono xilkas way iska diideen aan ka aheyn Anna Kinberg Batra oo ah xil-dhibaan oo horumood u ah xubnaha Moderateerna ee baarlamaanka.
Marka loo barbar dhigo waddamada kale ee yurub Sweden kaalinta ruuxa ee siyaasadda waa mid naaqus ah, halka xisbiga leeyahay muhiimadda, sida ay tiri Jenny Madestam oo culumta siyaasadda ka dhigata jamacadda Stcokholm.
- Waxaahn u sabab ah in Swedenn taariikhiyan xisbiyada ay muhiimada lahaayeen, halka ruuxa uusan sidaas u muhim aheyn. Waxaan u codeynaa xisbiga, uma codeyno ruuxa, halka waddamada kale ruuxa ka muhimsan yahay xisbiga. Laakiin hanaanka siyaasadda Sweden kaalionta ruuxa waa la naaqusiyey, ayey tiri Jeni Madestam oo jamacadda Stockholm ka dhigta culuumta siyaasadda.